नेपालका लागि दुख्त खबर! मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल पराजित - सुदूर नेपाल
नेपालका लागि दुख्त खबर! मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल पराजित
Dinesh khaptadi June 2, 2019 0
नेपाल र मलेसियाबीच मलेसियामा सम्पन्न मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल पराजित भएको छ । पहिलो हाफ बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो हाफमा २ गोल खान पुग्यो । नेपाल मलेसियासँग दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा दुई शून्यले नतिजा सुम्पिन पुग्यो ।
अनन्त तामाङले डि बक्समा फल गरेपछि ५१ औं मिनेटमा मलेसियाले पेनाल्टीमा गोल गरेको थियो । नेपाल पहिलो गोल पेनाल्टीबाट खायो भने दोस्रो गोल मलेसियाले फ्री किकमा हेडिंगमाफर्त गरेको थियो । मलेसियाका मोहम्मद सफावई राशिदले दुबै गोल गरे । खेलमा मलेसिया नेपालमाथि हावी देखिए पनि गोल भने गर्न सकेन । नेपालले गोलको मौका भने खासै बनाउनसमेत सकेन । मलेसियासंगको खेलपछि नेपालले अर्को मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न चाईनिज ताईपे जाने छ ।
फिफा वरियतामा आफूभन्दा तलको मलेसियाविरुद्ध नेपालले पाएको केहि अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न सकेन । खेलको २९ औं मिनेटमा बिक्रम लामाले प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो । फिफा वरियतामा नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा रहँदा मलेसिया १ सय ६८ औं स्थानमा रहेको छ ।खेलका लागि नेपाली दर्शकहरुको स्टेडियममा बाक्लो उपस्थिति थियो । विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको नेपालले विशेष तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो । फिफा वरियतामा नेपाल माथि देखिए पनि प्राविधिक रुपमा मलेसिया बलियो टिम हो ।
Previous Post: मलेसियाले फेरि हान्यो गोलो, नेपाल ० हेर्नुहोस पछिल्लो अपडेट
Next Post: गलबन्दी संग जोडिएर प्रकाश सपुत पहिलोपटक मिडियामा – भिडियो